आज यति धेरै ले घट्यो सुनको मुल्य , तोलाको कति ? – Khabar Silo
आज यति धेरै ले घट्यो सुनको मुल्य , तोलाको कति ?
काठमाडौँ । आज साताको (बिहीबार) सुनको भाउ ओरालो लागेको छ ।आज छापावाल सुन ७ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै, आज तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार ५ सय ६५ रुपैयाँमा कोरोबार भइरहेको छ। बुधबार तेजावी प्रतितोला ९१ हजार २ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।त्यस्तै, आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला ९५० रुपैयाँमा कोरोबार भइरहेको छ। बुधबार चाँदी प्रतितोला ९६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
यो पनि आज यूके पाउण्डसहित केही देशका मुद्राको भाउ बढ्यो
काठमाडौँ । आज असार १८ गते (२ जुलाई, बिहीबार) यूके पाउण्डसहित केही देशका मुद्राको भाउ बढेको छ ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ६५ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ २५ पैसामा झरेको छ । यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ ९ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३५ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ७ रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८५ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १५ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ।
कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ९२ पैसा तथा बिक्रिदर ३९३ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३१९ रुपैयाँ ५२ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ।
काठमाडौं – मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा १ सय रुपैयाले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ९१ हजार ३ सय रुपैयामा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज १ सय रुपैयाले घटेर प्रतितोला ९१ हजार २ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ७ सय ६५ […]
डेल्टा एयरलायन्सका ५०० कर्मचारीलाई कोरोना, १० जनाको मृत्यु